KaungMyatTun(KaungGyi) | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
Author Archives: KaungMyatTun(KaungGyi)
မှန်တာလုပ် ဟုတ်တာပြော အားတင်းထားပါ သမီး…..
ကြုံရမယ် ဆုံရမယ် လမ်းခွဲရမယ်
ရိုးသားစွာ တုန့်ပြန်ရင်း ခေါင်းမော့ထားပါ သမီး……
အပြုံးတစ်ခုရဲ့  တန်ဖိုး
တောင်းတချိန်မှ သိတတ်တဲ့ လူတွေများပေမယ့်
ပြီး ပြည့်စုံတဲ့ စုးငြှောင့်ခလုတ်မရှိတဲ့
ညီညာချောမွေ့ပြီး စိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲ လိုပါတယ် ချစ်သမီး……..
2012 Oct 24, 9:44PM
Leaveacomment	| tags: ကဗျာ
by စွန်းထင်ခဲ့သော မှင်စက်များ on Saturday, September 22, 2012 at 5:29pm ·
လက်ဆောင် အဖြစ်နဲ့ ရခဲ့ဖူးတဲ့
ချစ်သူရဲ့  အလုံးစုံသော ဖြစ်တည်ခြင်းများ
ရှေးဟောင်း ပင်ဒိုရာ သေတ္တာထဲမှာလို
ရှေးလူသားကတော့ ရုတ်တရက် ပြန်ပိတ်လိုက်လို့
ချစ်သူရဲ့  ပင်ဒိုရာ သေတ္တာထဲက ရှိဖြစ်တည်ခြင်းများ
အပြုံး တစ်ခုနဲ့ ငေးမောကြည့်ရင်း
Love Cycle (အချစ်သံသရာ)
အချစ်ဆိုသည်မှာ၊ ရေနှင့်တူသည်။ ကြည်လင်သည်။ အရောင်မရှိ၊ ဖော်ပြလို့ရတဲ့ ပြောပြလို့ရတဲ့ အရသာမရှိ။ ရေဆိုသည်လည်း ထိုအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ကောင်းသော်လည်း ရောနှောပတ်သက်မှုကြောင့် ပြောင်းလဲတတ်သော သဘောတရားရှိသည်။ ၄င်း၏ ပင်ကိုမူလသည်မှာ ရေစင်ပင်ဖြစ်သည်။
အချစ်ဆိုသည်မှာ၊ ယောက်ျားလေးများတွင် ချစ်တတ်လာပြီ ဆိုလျှင် ထိုအချစ်များသည် ရေကဲ့သို့ စီးဆင်းလာပါသည်။ ဒီလိုဖြင့်ပင် ချစ်တတ်သော ယောက်ျားလေးများသည် မြစ်ချောင်းများကဲ့သို့ ရေကို စီးဆင်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယောက်ျားလေးများ၏ အချစ်သည် မြစ်ချောင်းများကဲ့သုို့ အချစ်များကို အစဉ် စီးဆင်းစေသည်။ အချစ်မရှိသေးသော အချိန်အထိ ယောက်ျားလေးများ၏ ဘ၀သည် ရေမရှိသော မြစ်ချောင်းများကဲ့သုို့ ခြောက်သွေ့ နေတတ်ပါသည်။
အချစ်ဆိုသည်မှာ၊ မိန်းမလေးများတွင် ချစ်တတ်လာပြီဆိုလျှင် ထိုအချစ်များသည် ဆည်များ ကန်များတွင် ရေရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ပင် အချစ်များကို တောင့်တလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချစ်တတ်သော မိန်းမလေးများသည် မြစ်ချောင်းများစီမှ စီးဆင်းလာသော ရေများကို လှောင်ထားတတ်သော ဆည်များ ကန်များကဲ့သို့ပင်၊ ၄င်းတို့အတွက် ပြည့်စုံသောအချစ်များ ပြည့်ဝသည်အထိ သိုလှောင်ပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် မိန်းမလေးတွေရဲ့  အချစ်သည် ဆည်တွေကန်တွေကဲ့သို့ပင် အချစ်များဖြင့် အစဉ်အမြဲ ပြည့်ဝနေစေပါသည်။ အချစ်မရှိသေးသော အချိန်အထိ မိန်းမလေးများ၏ဘ၀သည် ရေမရှိသော ဆည်၊ ကန်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
မြစ်ချောင်းဖြင့်တူသော ယောက်ျားလေးနှင့် ဆည်ကန်ဖြင့် တူတဲ့ မိန်းမလေး နှစ်ယောက် ချစ်မိကြပြီဆိုလျင်……ယောက်ျားလေးက မိန်းမလေးအတွက် လိုအပ်သော အချစ်များကိုပြည့်ဝစေရန် အစဉ်အမြဲ ဖြည့်တင်းပေးရပါသည်။ မိန်းမလေးသည်လည်း ၄င်းအတွက် လိုအပ်သော အချစ်ပမာဏထက် ပိုမိုသော အချစ်များကို ရရှိတော့မှသာ ၄င်းချစ်သော မြစ်ချောင်းဖြင့်တူသော ယောက်ျားလေးကို အချစ်တွေ ပြန်ပေးသဖြင့် မြစ်ချောင်းဖြင့်တူသော ယောက်ျားလေးသည်လည်း အချစ်များ ပြန်လည်ရရှိပြီး လောကလမ်းကို ဆက်လက်ပြီး လျောက်လှမ်းသွားနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုဖြင့် ချစ်တတ်သောသူနှစ်ဦး ဖြစ်လာပါတော့သည်။
မြစ်များ ချောင်းများသည် ပင်လယ်တွင်းသုို့ စီးဆင်းပါသည်။ ထိုပင်လယ်ကြီးသည် လူ့လောကကဲ့သို့ပင် ကျယ်ဝန်း၊ နက်ရှိုင်းပါသည်။ ပင်လယ်ဖြင့် တူသော ထိုလောကကြီးသည်လည်း အချစ်များကို လိုအပ်ပါသည်။ အချစ်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားမှသာလျှင် ထိုလောကကြီးသည် သာယာလှပနေပေမည်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ထဲတွင် ရေများ အမြဲရှိနေပါသော်လည်း၊ မြစ်ချောင်းတိုင်းကတော့ ပင်လယ်သို့ ပေးအပ်သော ရေပမာဏက မတူညီနိုင်ကြပါ။ သို့သော်လည်း ပင်လယ်ကြီးသည် စီးဝင်လာမည့် ရေများကို အမြဲလက်ခံနေဦးမည်ပင်ဖြစ်သည်။
နေမင်းကြီးက…ဘာသာတရားဖြင့်တူသည်။ နေ၏ စွမ်းဆောင်ပေးမှုကြောင့် ပင်လယ်ထဲမှ ရေများသည် အငွေ့ အဖြစ်ဖြင့် တိမ်တိုက်တွေဖြစ်ပြီး မြစ်ချောင်းများ၊ ဆည်ကန်များ၏ မူလပထမ ရေကြည်စင် ဖြစ်တည်ရန်အတွက် ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများကို ဖန်တီးပေး တည်ဆောက်ပေးသော ဘာသာတရားကြောင့် အေးချမ်းသော ကြည်လင်မှုအပြည့်ရှိသော ရေစင်ကို ဖြစ်တည်စေပါသည်။
တောင်တန်းများသည် မိဘနဲ့တူတယ်သည်။ အချစ်စစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ တူသော ရေစင်စစ်စစ်သည် ထိုနေရာတွင်သာ ဖြစ်တည်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ၄င်းရေများကိုမြစ်ချောင်းများ၊ ဆည်ကန်များထဲသို့ စီးဆင်းသွားစေသော်လည်း မည်သည့်အခါမျှ စီးဆင်းသွားသောရေများကို စုန်ပြန်လာစေရန် မျှော်လင့်မနေတတ်ပါ။ သူတို့မှ ဖြစ်တည်သွားတဲ့စတင်သွားတဲ့ ရေလို အချစ်တွေ လောကနဲ့တူတဲ့ ပင်လယ်ထဲကို စီးဆင်းသွားသည်ကိုပဲ အပြုံးမျက်နှာဖြင့် စောင့်ကြည့်နေတတ်သော မိဘများပင်ဖြစ်ပါသည်။
သစ်ပင်တောအုပ်များသည် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ဆွေမျိုးများဖြင့် တူသည်။ ၄င်းတို့ကလည်း ရေဖြင့်တူသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လုိုအပ်ကြသကဲ့သို့ ၄င်းတို့ကြားသုို့ မြစ်ချောင်းလေးများ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားစေချင်ကြသည်။ တခါတရံ ဆည်ကန်တည်သောအခါ အနည်းအများသော သစ်ပင်များ ပျက်စီးသွားတတ်ကြပါသည်။ သစ်ပင်တောအုပ်များဖြင့် ဖြစ်ချောင်းလေးတွေကလည်း အပြန်အလှန် မှီခိုအားထားနေကြရသော မိတ်ဆွေကောင်း ဆွေမျိုးကောင်းတွေပင်ဖြစ်သည်။
ဒီလိုဖြင့်ပင် ရေသံသရာ လည်နေသကဲ့သို့ အချစ်သံသရာ လည်တတ်ပါသည်။
1 Comment	| posted in ရောက်တက်ရာရာ
>> မှင်စက်@Yokohama <<
မင်းမရှိရင် မသင်းပျံ့ သလိုပဲ။
ကိုယ်သိတဲ့ အချစ်နဲ့ အခြားသူသိတဲ့ အချစ်
ဘာကွာခြားလဲ သိချင်လို့ မေးတာလား။
မေးခွန်းမေးတဲ့ သူရဲ့  ဆိုလိုရင်းကို
ကိုယ်တိုင် ခံစားကြုံတွေ့ ကြည့်လိုက်ပါ။
ကိုယ်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အချစ်၊
ကိုယ်မြင်တွေ့နေရတဲ့ အားကျစရာ အချစ်၊
ကိုယ်မြင်တွေ့ နေရတဲ့ ရင်နာစရာ အချစ်၊
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ရာ အချစ်၊
စတဲ့စတဲ့ အချစ် ပုံစံပေါင်းများစွာ
ကုိုယ့်အတွက် ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ အချစ်၊
ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်တည်လာမယ့် အချစ်၊
ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်တည်နေတဲ့ အချစ်၊
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပဲ
ပူလောင်တတ်တဲ့ အချစ်၊ အေးမြတတ်တဲ့ အချစ်၊
ငိုကြွေးရတဲ့ အချစ်၊ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ အချစ်၊
၀မ်းနည်းရတဲ့အချစ်၊ ၀မ်းသာရတဲ့ အချစ်၊
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့အချစ်၊ မျှဝေတတ်တဲ့ အချစ်၊
သစ္စာမဲ့တဲ့အချစ်၊ သစ္စာရှိတဲ့ အချစ်၊
စတဲ့စတဲ့ အချစ် လောကဓံ တွေများစွာ
ရေးသားသူ။ ။ ကောင်းမြတ်ထွန်း
1 Comment	| posted in အချစ်
” မနက်ခင်းနေခြည် “
မနက်ခင်းရဲ့  နေရောင်ခြည်က
မင်းရဲ့ တစ်နေ့တာအတွက် အားအင်တွေတော့
အမြဲ ဖြည့်တင်းပေးမဲ့ ပထမဆုံးသူပါ။
မင်းရဲ့ တစ်နေ့တာအတွက် အလင်းတန်းကို
တစ်ခါတစ်လေ တိမ်ဖုံးပြီး မမြင်နုိုင်ပေမယ့်
အမြဲ အဆင်သင့် စောင့်နေသူပါ။
မနက်ခင်းရဲ့  နေခြည်က
မင်းအတွက် မနက်ခင်းရဲ့ 
1 Comment	| tags: love, poem
On these day
For those sky
Be patient to them
Although you have to
through them to reach me
They, my parents, always
Are my respect and cover me
For those clouds
Don’t mad at them
They, my friends, often
Give shadows to rest and rain or snow to entertain me
For those strong wind
Don’t care them
They, my enemies, sometime
Make my eyes not to see clearly
But they bring the clouds for me
Hey, my beloved sunshine
You alone can make me warm
That is the most I need
Poet: Kaung Myat Tun
AirCon (vs) Heater
ကျွန်တော်ဟာ AirCon ဖွင့်ပြီး နေနေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ Heaterဖွင့်ပြီး နေနေရပါတယ်။
Walk on the way you believe
That way might be rude
May bearocky way
People may say gossip about you
People may ask why not choose the old way
Many mistakes has to be faced
There might be lots of difficulties
Has to changealot on the way
May be dream not come true quickly or may be too far
But believe in your choice
And go on your walk
Because the main thing is you do not stop.
Just walk on the way.
Written by Kaung Myat Tun
လူဆိုတာ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ လမ်းကို လျှောက်ရမှာပဲ။
ယုံကြည်ချက်အရ လျှောက်တဲ့ လမ်းက ကြမ်းချင်ကြမ်းမယ်။
ဆူးခင်းတဲ့ လမ်းတွေ လျှောက်ချင်လျှောက်ရမယ်။
မြန်ချင်မှ မြန်မယ်၊ နှေးကောင်းနှေးမယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို ကိုယ်ယုံတယ်။
ဘာလို့လည်း ဆိုရင် အဓိက က ရပ်တန့်မနေဖို့ပဲလေ။
ရေးသားသူ၊ ။ ကောင်းမြတ်ထွန်း
အဲဒီနေ့က Yoyogiဘက်ကိုရောက်ပြီး နေ့လည်စားစားပြီးတော့ အချိန်လည်းရနေတာနဲ့ ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားရင်းနဲ့ Google Mapကို ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ အနီးအနားမှာ အပျင်းပြေလမ်းလျောက်ရင်း နားနားနေနေနေလို့ရမယ့်နေရာလေးကို ရှာကြည့်မိတယ်။ ၁၀မိနစ်လောက်လမ်းလျောက်ရင် သွားလို့ရမယ့် ပန်းခြံတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတော့ အဲဒီကိုသွားပြီး အပျင်းပြေ လမ်းလျောက်ဦးမှပဲဆိုပြီး သွားလိုက်ပါတယ်။
ပန်းခြံအ၀င်ဝလည်းရောက်တော့ ၀င်ကြေးက ၂၀၀ ဆိုပဲ။ ဘာတွေများရှိလို့ပါလိမ့် အတွေးနဲ့ တန်ပါတယ်လေဆိုပြီး လက်မှတ်ဝယ်တဲ့စက်မှာ ၁၀၀၀ တန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ စက်က ၁၀၀၀တန်ကို မသိဖြစ်နေပေမယ့် အကြွေ၂၀၀ လည်းမရှိတော့ ကောင်တာမှာပဲ တစ်ယောက်စာလက်မှတ်ကို ၀ယ်လိုက်ပါတယ်။ အ၀င်ပေါက်ကစက်မှာ လက်မှတ်ကို ထည့်လိုက်တော့ လက်မှတ်က ပြန်ထွက်မလာတော့ဘူး။ အယ်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုတော့ ပြန်မထွက်ပါတဲ့ ရေးထားတာပဲ။
အ၀င်ဝမှာ လမ်းညွှန်စာရွတ်လေးတွေထားထားတာကိုယူလိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို လိုချင်ရင်ကောင်တာမှာ တောင်းဆိုတာနဲ့ သွားတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီပန်းခြံကို ဘယ်လို လာလို့ရလဲဆိုတာက ဒီမှာ Clickကြည့်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ Sendagaya Gate ကနေ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀င်လိုက်တာနဲ့ တွေ့လိုက်ရတာက မြက်ခင်း စိမ်းစိမ်းတွေ
သစ်ပင်အကြီးကြီးတွေ သာယာလိုက်တာ အေးချမ်းလိုက်တာ ဒီလိုနေရာမျိုး ရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်တောင် ထင်မထားခဲ့ဘူး။
၂၀၀ ကတော့ အတော်လေးကို တန်သွားပြီ။ ကဲဘယ်ကနေစသွားရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရင်းနဲ့ မြေပုံကို ကြည့်လိုက်
ပါတယ်။ အပြန်က Shinjukuကနေပြန်မယ်လို့စဉ်းစားထားတော့ အဲဒီထွက်ပေါက်နဲ့ နီးတဲ့ ဘက်ကို နောက်ဆုံးမှ သွားတာပေါ့။
အရင်ဆုံး Middle Pond လို့ခေါ်တဲ့ ရေကန်လေးရှိတဲ့နေရာကို မပွင့်သေးတဲ့ ချယ်ရီပင်တွေကြားက ဖြတ်ပြီး သွားရမယ်။ အသက်ရှုလို့ကောင်းလိုက်တာ လေတွေက လတ်ဆက်နေတာပဲ။ ရေကန်လေးရှိတဲ့နေရာက ထိုင်ခုံလေးမှာ ခဏထိုင်ပြီး နားနားနေနေ အသက်ရှုရင်း ထိုင်နေမိတယ်။ သစ်ပင်ကြီးတွေက အကြီးကြီးတွေပဲ။ မြတ်ခင်းတွေက စိမ်းလိုက်တာ ပြင်ဦးလွင်က အမျိုးသားပန်းခြံကြီးကို လွမ်းလိုက်တာ။ မြက်ခင်းပေါ်မှာလည်း လူတွေက သူ့အဖွဲ့လေးနဲ့ သူ ထိုင်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ယောက်တည်းပဲပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပွဲစားလို ပုံစံမျိုးလာရင် အတော်ကောင်းမယ့် နေရာလေးပဲ။ တချို့ မိသားစုလေးတွေလည်း ပျော်ပွဲစားထွက်လာကြတယ်ထင်ပါတယ်။
Middle Pond ရဲ့ အလှအပကို ခံစားရင်းသစ်ပင်တွေကြားကနေ ဆက်လမ်းလျောက်လာခဲ့ပါတယ်။ လမ်းလျောက်ရင်းနဲ့ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ လှဲချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ့ ခဏလှဲပြီး ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့် လိုက်မိသေးတယ်။ ခဏနေတော့ မြေပုံကြည့်ပြီး Franch Formal Gardenဘက်ကို သွားဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်ဥယျာဉ်ဆိုတော့ ဘာတွေများရှိပါလိမ့် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပေါ့။
France Formal Gardenရောက်ခါနီးတော့ နှင်းဆီပန်းပင်တွေက အဝေးကြီးကနေတောင် လှမ်းမြင်နေရတယ်။ လှလိုက်တာဗျာ။ အနားနားရောက်တော့ ကင်မရာမန်းတွေက အသေကို ရိုက်နေကြတာပဲ။ တစ်ယောက်သောသူ အဖိုးကြီးကတော့ ပန်းချီဆွဲနေလေရဲ့  နှင်းဆီနီနီတွေကိုလေ။ နှင်းဆီပန်းတွေမှ အမျိုးတွေအများကြီးပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်လိုက်သေးတယ်။ ဘေးမှာက အပင်အမြင့်ကြီးတွေကို စီတန်းစိုက်ထားတဲ့ ထိုင်ခုံလေးတွေ တန်းစီထားတဲ့ နေရာမှာတော့ အဖွားကြီးသုံးယောက်က ပန်းချီဆွဲနေကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခဏထိုင်ပြီး ရှုခင်းလေတွေရှုစားရင်း မြေပုံကိုကြည့်ပြီး ဘယ်ဆက်သွားမလဲ ပေါ့။ English Landscape Garden ကိုဖြတ်ပြီး Tamamo Pondကိုသွားရမယ်။ အဲဒီလမ်းမှာလည်း ပန်းချီဆွဲနေကြတဲ့ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ချောင်းနေကြတဲ့ လူတွေ တွေ့ရတယ်။ ကလေးလေးတွေ အဖွဲ့ လိုက်လာပြီး လေ့လာကြတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်။ Tamamo Pondလဲ လှတာပဲဗျ။ ရေကန်လေးထဲမှာ ငှက်ကလေးတွေနားနေကြတယ်။ တံတားလေးနှစ်ဆင်းက လည်း ကဗျာဆန်ဆန်နဲ့ တံတားတစ်စင်းဖြစ်ချင်တယ် ကဗျာကို သွားသတိရလိုက် မိသေးတယ်။
အဲဒီကနေ ဆက်ပြီး လမ်းလျောက်လာတော့ ပြုပြင်ဆဲ Green House ကိုဖြတ်ပြီး ဟိုးအရင်တုန်းက ဂျပန်ဘုရင်တွေ နားနေဖို့ ဆောက်ထားတဲ့ နားနေဆောင်လေးကိုရောက်တယ်။ သေချာစာတွေဖတ်ကြည့်တော့ ဒီပန်းခြံကြီးက စစခြင်းတုန်းကတော့ ပန်းခြံပဲ နောက်တော့ ဘုရင်က သူ့အနားယူဖို့ သေချာပြင်ဆင်ပြီး အနားယူတဲ့နေရာလုပ်ခဲ့သတဲ့။ နောက်တော့ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်လုပ်လိုက်ပြီး အခု အမျိုးသားဥယျာဉ်ဖြစ်လာတယ် ဆိုပဲ။ ပြီးတော့ ဒီက သစ်ပင်ကြီးတွေက မေဂျီခေတ်လောက်ကတည်းက ရှိခဲ့တာဆိုပဲ။ အဲဒါကြောင့် အတော်ကြီးကို ကြီးကြတာကိုး။
ဘုရင့်နားနေဆောင်က ဒုတိယပတ် စနေနေ့တွေမှာပဲ ပေးကြည့်တာဆိုတော့ အဲဒီနေ့က မကြည့်ခဲ့ရဘူး။ အဲဒီအိမ်ရှေ့ က အပင်ကြီးက ထူးဆန်းသလိုပဲ။ အပြင်ကနေပဲ ကြည့်ရှုလေ့လာပြီး ဆက်လျှောက်ဖြစ်တယ်။ Taiwan Pavilion ကိုသွားမယ်ဆိုပြီး လမ်းသွားရင်းနဲ့ ဘေးဘီကို ကြည့်တော့ ကလေးအမေတွေ အဖွဲ့ လိုက်တွေ့ရတယ်။ အမေတွေက စကားပြောကြ ကလေးတွေက ဆော့ကြနဲ့ လူသားတွေ အတူတူပဲနော်။
Taiwan Pavillion ဆိုတာက ဟိုးရှေးခေတ်တရုတ်အိမ်ပုံစံလေးပဲ။ အဝေးကကြည့်ရင်လှပေမယ့် အထဲသွားကြည့်တော့လည်း ဇရပ်လေးလိုပဲ။ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦးလေးပဲ။ အဲဒီကနေ လမ်းလျောက်ပြီး Japanese Garden ကိုသွားတယ်။ မြက်ခင်းပေါ်မှာ တချို့ လူတွေ လှဲအိပ်နေကြတော့ ကျွန်တော်လည်း အိပ်ချင်လာတာနဲ့ နေရာလေးရွေးပြီး နာရီဝက်လောက် လှဲပြီး အိပ်လိုက်တယ်။ လမ်းလျောက်ထားတဲ့ အညောင်းတွေလည်း ပြေသွားတာပေါ့။
ပြီးတော့ အပြန်လမ်းဖြစ်တဲ့ Shinjuku Gate ဘက်ကို ဦးတည်တော့ Japanese Tea House ဆိုလို့ဘာပါလိမ့်ဆိုပြီး ဖတ်ကြည့်တော့ ရိုးရာလက်ဖက်ရည်ဖျော်ပေးတာကို ကြည့်ပြီး သောက်တဲ့ နေရာပဲ။ တစ်ခွက် ၇၀၀ ဆိုတော့လည်း ဈေးကြီးပါတယ်လေ ဆိုပြီး ဆက်လမ်းလျောက်ခဲ့တယ်။ Mother and child’s Forest နားကိုရောက်တော့ နည်းနည်း အနံ့အသက်မကောင်းသလိုပဲ။ အဲဒီ တောထဲကို ဖြတ်သွားတော့ အကောင်ပလောင်လေးတွေ အသံကို သဲသဲကွဲကွဲ ကြားရတယ်။ သစ်ပင်ကြီးတွေ အကြီးကြီးတွေကြားထဲမှာ လမ်းလေးသေးသေးလေးဖောက်ထားတဲ့ နေရာကနေသွားရတာ တောင်ကြီးတုန်းက တောင်တက်ပြီး လျောက်သွားခဲ့တာကို ပြန်သတိရမိတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ထွက်ပေါက် Shinjuku Gateကိုရောက်တော့ အပြင်ကို ထွက်ပြီး အအေးတစ်ဗူးဝယ်သောက်ပြီး ဘူတာအထိလမ်းလျောက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အတော်လေးကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုပဲ။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကြုံကြိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် တကူးတကပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွားသင့်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါပဲ။ ရာသီအလိုက် ပန်းပင်တွေ ပွင့်တာကို ခံစားရင် အပန်းဖြေဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုမို့လို့ ညွှန်လိုက်ပါတယ်ဗျ။
2 Comments	| posted in သွားပါများခရီးရောက်
(အောက်တိုဘာလတိုင်းမှာ ပြန်လည် နိုးထတတ်တဲ့ …..)
(အမှတ်တရတွေ ရှိတဲ့ အောက်တိုဘာ လတိုင်းအတွက်….)
1 Comment	| posted in ကဗျာ
Alien Registration Cardပြုလုပ်ခြင်း
ဂျပန်မှာ သုံးလထက်မက နေထိုင်မယ့် သူတွေ မလုပ်မနေုလုပ်ရမှာကတော့ Alien Registration Cardပါပဲ။ ဒီကဒ်ကို ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ 区役所・市役所တွေမှာ လုပ်ရပါမယ်။ အဲဒီရုံးတွေက ရုံးဖွင့်ရက်တွေ မနက် ၈နာရီခွဲကနေစပြီး ဖွင့်ပါတယ်။ လတိုင်းရဲ့  တတိယအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလည်း ဖွင့်တတ်ပါတယ်။
ကဒ်လုပ်ဖို့ ယူသွားရမှာတွေက Passport ရယ် ဓာတ်ပုံရယ် ပါပဲ။ ကိုယ်နေတဲ့ လိပ်စာ မသိရင်လည်း ရေးပြီးယူသွားသင့်ပါတယ်။ အလုပ်ရဲ့ လိပ်စာရောပေါ့။ အဲဒီမှာ Form ဖြည့်ပြီးရင် လျောက်ထားမှုက ပြီးပါပြီ။ ရက်ချိန်းပေးပြီး။ အဲဒီရက်ချိန်အတွင်းမှာ ကဒ်ကို သွားပြီး ထုတ်ယူရပါမယ်။ ပိုက်ဆံ ပေးစရာ မလိုပါဘူး။
အဲဒီကဒ်က ဂျပန်မှာ နေစဉ်အတွင်း မိမိရဲ့  Identity Card အနေနဲ့ သုံးရပါတယ်။ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်တာ စသဖြင့် နေရာ အမျိုးမျိုးမှာ ပြသ အသုံးပြုရပါတယ်။
Leaveacomment	| posted in Living in Japan
မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို သွားမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးVISAရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အောက်ပါဗီဇာတွေနဲ့ သွားကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Training (Examples: trainees inacompany,alocal government, etc., participants in the Industrial Training and Technical Internship Program, etc. (* Including practical training for 90 days or less)
လေယာဉ်ပေါ်မှာ လေယာဉ် မဆိုက်ခင်ကတည်းက Embarkation Cardကို ဖြည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာတွေဖြည့်ရတာလည်းဆိုရင် ကိုယ့်နာမည်၊ ဂျပန်မှာ နေမယ့် လိပ်စာ၊ လေယာဉ်အမှတ်၊ အလုပ်အကိုင်၊ စသဖြင့် ကိုယ်သိပြီးသား အကြောင်းအရာ တွေကိုဖြည့်ရပါတယ်။ ဘောပန်နဲ့ ဖြည့်ရပါတယ်။ မပါလာရင်လည်း လေယာဉ်မယ်လေးတွေစီကနေ တောင်းလို့ရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို ၀င်ရောက်ဖို့ အရင်ဦးဆုံး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ကောင်တာမှာ တန်းစီရပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်ကနေ အများဆုံး တစ်နာရီလောက်တန်းစီပြီး စောင့်ရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာရင် Passport နဲ့ Embarkation Cardကိုပြပြီး လက်ဗွေဖတ်တဲ့ စက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့  လက်ဗွေကို ဖြတ်ရပါတယ်။ ပြီးရင် ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံပြီး အထွေအထူး ပြဿနာ မရှိဘူးဆိုရင် ဆိုက်ရောက်ကြောင်းLanding Permissionကပ်ပေးပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို ၀င်ခွင့် ပြုလိုက်ပါပြီ။
ကပ်ပေးလိုက်တဲ့ ဗီဇာသက်တမ်းကိုလည်း စစ်ဆေးကြည့်တာကောင်းပါတယ်။
တခါတလေ ရစ်ချင်တဲ့ အခါ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဒုတိယအဆင့် စစ်ဆေးခြင်းဆိုပြီးတော့ ဘေးနားက အခန်းထဲကို ခေါ်သွားတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်က Temporary Visit VISA နဲ့ လာတဲ့သူတွေကို စစ်ဆေးတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ COEသက်တမ်းကျော်နေရင်လည်း စစ်ဆေးတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လာရင်းကိစ္စကို အမှန်အတိုင်း ပြောပြရင် ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ တခါတလေလည်း Local Contact ကိုဖုန်ဆက်ကြည့်ပြီး ဟုတ်မဟုတ် စစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုရင် ပြဿနာမရှိပဲ ဆိုက်ရောက်ကြောင်းLanding Permissionကပ်ပေးပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို ၀င်ခွင့် �